ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်း ASUS ZenFone Max Pro M1 နဲ့ Xiaomi Redmi Note5Pro ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်း ASUS ZenFone Max Pro M1 နဲ့ Xiaomi Redmi Note5Pro...
ASUS က သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဖုန်းနဲ့ ဘတ်ဂျက်ပိုင်းမှာ Xiaomi ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် Xiaomi ဟာ ဘယ်သူမှမသိတဲ့ တရုတ် brand လေးတစ်ခုကနေ အိန္ဒိယရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းတွေကို အရည်အသွေးကောင်းကောင်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်တုန်းက ဘတ်ထရီသက်တမ်းကို ဦးစားပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ MIUI ကို ဘတ်ထရီသက်တမ်းကြာအောင် ဦးစားပေးပြီးတော့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်ကတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေဟာ ဘတ်ထရီသက်တမ်းပိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နှစ်ရက်လောက်အသုံးခံတဲ့ ဘတ်ထရီသက်တမ်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တွေက Redmi Note4ကို အိန္ဒိယမှာ ရောင်းးအားအကောင်းဆုံးဖုန်းအဖြစ် ရပ်တည်စေနိုင်ခဲ့တယ်။ Redmi Note5Pro ကလည်း hardware ကောင်းကောင်း၊ ကင်မရာမိုက်မိုက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး ဘတ်ထရီကလည်း အရင်ဖုန်းလိုမျိုး ခံနိုင်စွမ်းအပြည့်နဲ့ပါ။
ZenFone Max Pro M1 ထွက်လာချိန်မှာတော့ ASUS ဟာ Xiaomi ကို အနိုင်တိုက်သွားပါတယ်။
ZenFone Max Pro M1 ဟာ Redmi Note5Pro လိုပဲ Snapdragon 636 chipset ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
နှစ်ခုလုံးမှာ Snapdragon 636 chipset ၊ 4GB RAM ၊ 64GB storage ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Xiaomi က 6GB RAM နဲ့ 64GB storage ရောင်းပြီးတော့ ASUS ကတော့ နောက်ပိုင်းမှ လုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။
ASUS မှာ အားသာချက်တစ်ခုက Max Pro M1 မှာ 3GB RAM ၊ 32GB storage ရှိတဲ့ base version လေးက ဒေါ်လာ၁၆၅ ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စဉ်းစားလို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ Xiaomi မှာ အဲဒီဈေးနဲ့ရှိတာကတော့ standard Redmi Note5ဖြစ်ပြီး Snapdragon 625 နဲ့သာ အားဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေမှာ ၅.၉၉လက်မ IPS LCD display နဲ့ resolution 2160×1080 ဖြစ်လို့ ထပ်တူကျနေပါတယ်။ vibrant color နဲ့ viewing angle ကောင်းကောင်းတွေလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ M1 ရဲ့ ambient light sensor ကို အခက်အခဲနည်းနည်းရှိတယ်လို့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ software update နဲ့ ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ZenFone Max Pro M1 နဲ့ Redmi Note5Pro မှာ 3.5mm jack ရှိပြီးတော့ Xiaomi က IR blaster ပါဝင်လို့ ပိုကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Redmi Note5Pro ရဲ့အားသာချက်
Xiaomi က Redmi Note စီးရီးတွေကို အရမ်းကြီးမပြောင်းထားပါဘူး။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို ပြင်ဆင်ထားတာလေး အနည်းငယ်လောက်သာ ရှိခဲ့တာပါ။ Redmi Note5Pro ဟာ ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီးတော့ သေသပ်တဲ့ notch လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ZenFone Max Pro M1 ကို အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီခံစားချက်ကို ရနေစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ 5000mAh ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Redmi Note5Pro ထက် 1000mAh ပိုနေပြီး Xiaomi ဖုန်းထက် ၁ဂရမ်ပိုလေးပါတယ်။ ဒါကတော့ တည်ဆောက်မှုမှာအသုံးပြုထားတဲ့ သတ္ထုပစ္စည်းတွေကြောင့်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်တယ်လို့ မခံစားရသလို ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတာမျိုး မရှိပါဘူး။
၅.၉၉လက်မ M1 ကတော့ ကာကွယ်မှုအားလုံးကို ရှောင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကပ်လေးတော့ ဆောင်ထားရလိမ့်မယ်။ Xiaomi က Redmi Note5Pro မှာ ဘယ်လို Gorilla Glass အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားသလဲ မပြောထားပေမယ့် သုံးထားတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းမှာ ခွဲခြားပြစရာ များများတော့မရှိပါဘူး။ ZenFone Max Pro M1 က outdoor ရိုက်ချက်တွေမှာ ယောင်ယောင်လေးသာပြီးတော့ Redmi Note5Pro က indoor ပိုင်းမှာ သာပါတယ်။ အလင်းအားနည်းရိုက်ချက်တွေမှာဆိုရင်တော့ Redmi Note5Pro မှာ details တွေကို ခံစားနိုင်ပေမယ့်လည်း အရောင်တွေက ရောနေပါတယ်။
ZenFone Max Pro M1 ကအပေါ်မှာဖြစ်ပြီး Redmi Note5Pro ကတော့ အောက်ဘက်မှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။
portrait mode ကို ZenFone Max Pro M1 မှာစမ်းကြည့်လိုက်တာ အဆင်မပြေပါဘူး။ Redmi Note5Pro က ပိုကောင်းပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Redmi Note5Pro က ကင်မရာပိုင်းမှာ သာနေပါတယ်။
ပြောတာကတော့ Max Pro M1 စမ်းတုန်းက နောက်ဆုံးထွက် software build မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကင်မရာပိုင်းအရည်အသွေးတွေကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ ASUS က ဆိုထားပါတယ်။ stable build ကို April 29 မှာ ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အပိုင်းပါ။
ZenFone Max Pro M1 ရဲ့ အားသာချက်
ZenFone Max Pro M1 ဟာ Redmi Note5Pro ကို အနိုင်ရတဲ့အပိုင်းသုံးခုကတော့ software ၊ ဘတ်ထရီသက်တမ်း၊ ငွေကြေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ASUS ကတော့ pure Android နဲ့ ZenUI ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ အိန္ဒိယအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအပြောင်းအလဲကို အားလုံးက ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Android 8.1 Oreo က တစ်ခါတည်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး Xiaomi ကတော့ Redmi Note5Pro မှာ ဘယ်အချိန်ရမလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
M1 ရဲ့ software experience ကတော့ အချောသတ်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်။ ASUS ကတော့ မေ၃ရက်နေ့မှာ public
build လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
5000mAh ဘတ်ထရီနဲ့ဆိုတော့ ZenFone Max Pro M1 က ဘတ်ထရီပိုင်းမှာ အသာစီးရနေပါတယ်။ Redmi Note5Pro က တစ်ခါအားသွင်းထားရင် နှစ်ရက်လောက်ခံနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း M1 ကတော့ အပြတ်အသတ်ပါပဲ။
ဈေးနှုန်းအရဆိုရင်လည်း ASUS က ရူပီး ၁၀၉၉၉ နဲ့ အနိုင်ရထားပါတယ်။
Xiaomi hardware နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ နည်းနည်းအခက်ကြုံရနိုင်ပေမယ့်လည်း ASUS ဟာ pure Android ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Redmi Note5Pro ရောင်းပြီးလို့ နှစ်လကြာနေတဲ့အချိန်မှာ ရောင်းအားအကြောင်းကို မကြားရသေးပါဘူး။ flash sale နည်းဗျူဟာက Samsung လိုထုတ်လုပ်သူအတွက်သာ အဆင်ပြေနိုင်စေမှာပါ။ Xiaomi ကတော့ ဒီလိုအဆင့်အတန်းတွေ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့ပုံပါပဲ။
ဘယ်ဟာဝယ်သင့်လဲ? ZenFone Max Pro M1
Xiaomi ရဲ့ စီးပွားရေးမော်ဒယ်လ်တစ်ခုလုံးက ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာပါ။ ZenFone Max Pro M1 ရောက်လာတော့ Xiaomi အတွက် စိုးရိမ်စရာပါပဲ။
ASUS မှာ အလုံးရေ လောက်လောက်ငှငှရှိရဲ့လားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ထောက်ပံ့မှုကိစ္စတွေက အလုံးရေမလောက်မငှမှုကို ဖြစ်စေပြီးတော့ အောင်မြင်မှုက အဲဒီအရေးအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ ZenFone Max Pro M1 ကို မေသုံးရက်နေ့မှာ Flipkart ကတစ်ဆင့် ရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ASUS က သူ့ရဲ့နောကျဆုံးထှကျဖုနျးနဲ့ ဘတျဂကျြပိုငျးမှာ Xiaomi ကိုတိုကျခိုကျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့သုံးနှဈနဲ့ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျ Xiaomi ဟာ ဘယျသူမှမသိတဲ့ တရုတျ brand လေးတဈခုကနေ အိန်ဒိယရဲ့ အကွီးမားဆုံးသော စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဘတျဂကျြစမတျဖုနျးတှကေို အရညျအသှေးကောငျးကောငျးတှနေဲ့ ထုတျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ တဈနှဈတုနျးက ဘတျထရီသကျတမျးကို ဦးစားပေးပွီး ထုတျလုပျပေးခဲ့တယျ။ MIUI ကို ဘတျထရီသကျတမျးကွာအောငျ ဦးစားပေးပွီးတော့ ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။
ရလဒျကတော့ Xiaomi ဖုနျးတှဟော ဘတျထရီသကျတမျးပိုငျးမှာ ဦးဆောငျသူတှေ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ နှဈရကျလောကျအသုံးခံတဲ့ ဘတျထရီသကျတမျးနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ Redmi Note4ကို အိန်ဒိယမှာ ရောငျးးအားအကောငျးဆုံးဖုနျးအဖွဈ ရပျတညျစနေိုငျခဲ့တယျ။ Redmi Note5Pro ကလညျး hardware ကောငျးကောငျး၊ ကငျမရာမိုကျမိုကျနဲ့ တညျဆောကျထားပွီး ဘတျထရီကလညျး အရငျဖုနျးလိုမြိုး ခံနိုငျစှမျးအပွညျ့နဲ့ပါ။
ZenFone Max Pro M1 ထှကျလာခြိနျမှာတော့ ASUS ဟာ Xiaomi ကို အနိုငျတိုကျသှားပါတယျ။
ZenFone Max Pro M1 ဟာ Redmi Note5Pro လိုပဲ Snapdragon 636 chipset ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒီတော့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခကျြအလကျလေးတှကေို ယှဉျကွညျ့ရအောငျ။
နှဈခုလုံးမှာ Snapdragon 636 chipset ၊ 4GB RAM ၊ 64GB storage ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Xiaomi က 6GB RAM နဲ့ 64GB storage ရောငျးပွီးတော့ ASUS ကတော့ နောကျပိုငျးမှ လုပျမယျလို့ပွောထားပါတယျ။
ASUS မှာ အားသာခကျြတဈခုက Max Pro M1 မှာ 3GB RAM ၊ 32GB storage ရှိတဲ့ base version လေးက ဒျေါလာ၁၆၅ ပဲရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စဉျးစားလို့ကောငျးတဲ့အခကျြတဈခုပါပဲ။ Xiaomi မှာ အဲဒီဈေးနဲ့ရှိတာကတော့ standard Redmi Note5ဖွဈပွီး Snapdragon 625 နဲ့သာ အားဖွညျ့ထားတာဖွဈပါတယျ။
သူတို့တှမှော ၅.၉၉လကျမ IPS LCD display နဲ့ resolution 2160×1080 ဖွဈလို့ ထပျတူကနြပေါတယျ။ vibrant color နဲ့ viewing angle ကောငျးကောငျးတှလေညျး ပေးနိုငျပါတယျ။ M1 ရဲ့ ambient light sensor ကို အခကျအခဲနညျးနညျးရှိတယျလို့ တှခေဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ software update နဲ့ ပွငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ZenFone Max Pro M1 နဲ့ Redmi Note5Pro မှာ 3.5mm jack ရှိပွီးတော့ Xiaomi က IR blaster ပါဝငျလို့ ပိုကောငျးတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Redmi Note5Pro ရဲ့အားသာခကျြ
Xiaomi က Redmi Note စီးရီးတှကေို အရမျးကွီးမပွောငျးထားပါဘူး။ ဒီဇိုငျးပိုငျးကို ပွငျဆငျထားတာလေး အနညျးငယျလောကျသာ ရှိခဲ့တာပါ။ Redmi Note5Pro ဟာ ကောငျးမှနျစှာတညျဆောကျထားပွီးတော့ သသေပျတဲ့ notch လေးနဲ့ထှကျပျေါလာတာဖွဈပါတယျ။
ZenFone Max Pro M1 ကို အသုံးပွုတဲ့အခြိနျမှာ အဲဒီခံစားခကျြကို ရနစေရာမလိုအပျပါဘူး။ 5000mAh ရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ Redmi Note5Pro ထကျ 1000mAh ပိုနပွေီး Xiaomi ဖုနျးထကျ ၁ဂရမျပိုလေးပါတယျ။ ဒါကတော့ တညျဆောကျမှုမှာအသုံးပွုထားတဲ့ သတ်ထုပစ်စညျးတှကွေောငျ့လို့ ယူဆမိပါတယျ။ ကွံ့ခိုငျတယျလို့ မခံစားရသလို ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာလညျး စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးနတောမြိုး မရှိပါဘူး။
၅.၉၉လကျမ M1 ကတော့ ကာကှယျမှုအားလုံးကို ရှောငျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှနျကပျလေးတော့ ဆောငျထားရလိမျ့မယျ။ Xiaomi က Redmi Note5Pro မှာ ဘယျလို Gorilla Glass အမြိုးအစားကို အသုံးပွုထားသလဲ မပွောထားပမေယျ့ သုံးထားတယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
ကငျမရာပိုငျးမှာ ခှဲခွားပွစရာ မြားမြားတော့မရှိပါဘူး။ ZenFone Max Pro M1 က outdoor ရိုကျခကျြတှမှော ယောငျယောငျလေးသာပွီးတော့ Redmi Note5Pro က indoor ပိုငျးမှာ သာပါတယျ။ အလငျးအားနညျးရိုကျခကျြတှမှောဆိုရငျတော့ Redmi Note5Pro မှာ details တှကေို ခံစားနိုငျပမေယျ့လညျး အရောငျတှကေ ရောနပေါတယျ။
ZenFone Max Pro M1 ကဘယျဘကျမှာဖွဈပွီး Redmi Note5Pro ကတော့ ညာဘကျမှာတှမွေ့ငျရမှာပါ။
portrait mode ကို ZenFone Max Pro M1 မှာစမျးကွညျ့လိုကျတာ အဆငျမပွပေါဘူး။ Redmi Note5Pro က ပိုကောငျးပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ Redmi Note5Pro က ကငျမရာပိုငျးမှာ သာနပေါတယျ။
ပွောတာကတော့ Max Pro M1 စမျးတုနျးက နောကျဆုံးထှကျ software build မဟုတျဘူးလို့ပွောပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ကငျမရာပိုငျးအရညျအသှေးတှကေို ပိုကောငျးအောငျလုပျဆောငျထားတယျလို့ ASUS က ဆိုထားပါတယျ။ stable build ကို April 29 မှာ ထှကျရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့အပိုငျးပါ။
ZenFone Max Pro M1 ရဲ့ အားသာခကျြ
ZenFone Max Pro M1 ဟာ Redmi Note5Pro ကို အနိုငျရတဲ့အပိုငျးသုံးခုကတော့ software ၊ ဘတျထရီသကျတမျး၊ ငှကွေေးတို့ ဖွဈပါတယျ။ ASUS ကတော့ pure Android နဲ့ ZenUI ကိုပေါငျးစပျပွီးတော့ အိန်ဒိယအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ တုံ့ပွနျမှုကိုနားထောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအပွောငျးအလဲကို အားလုံးက ကွိုဆိုခဲ့ပါတယျ။ နောကျတဈခုက Android 8.1 Oreo က တဈခါတညျးထှကျပျေါလာတာဖွဈပွီး Xiaomi ကတော့ Redmi Note5Pro မှာ ဘယျအခြိနျရမလဲဆိုတာ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။
M1 ရဲ့ software experience ကတော့ အခြောသတျဖို့လိုနပေါသေးတယျ။ ASUS ကတော့ မေ၃ရကျနမှေ့ာ public
build လုပျပေးမယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
5000mAh ဘတျထရီနဲ့ဆိုတော့ ZenFone Max Pro M1 က ဘတျထရီပိုငျးမှာ အသာစီးရနပေါတယျ။ Redmi Note5Pro က တဈခါအားသှငျးထားရငျ နှဈရကျလောကျခံနိုငျတယျဆိုပမေယျ့လညျး M1 ကတော့ အပွတျအသတျပါပဲ။
ဈေးနှုနျးအရဆိုရငျလညျး ASUS က ရူပီး ၁၀၉၉၉ နဲ့ အနိုငျရထားပါတယျ။
Xiaomi hardware နဲ့ပတျသတျပွီးတော့ နညျးနညျးအခကျကွုံရနိုငျပမေယျ့လညျး ASUS ဟာ pure Android ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
Redmi Note5Pro ရောငျးပွီးလို့ နှဈလကွာနတေဲ့အခြိနျမှာ ရောငျးအားအကွောငျးကို မကွားရသေးပါဘူး။ flash sale နညျးဗြူဟာက Samsung လိုထုတျလုပျသူအတှကျသာ အဆငျပွနေိုငျစမှောပါ။ Xiaomi ကတော့ ဒီလိုအဆငျ့အတနျးတှေ မလိုအပျဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့ပုံပါပဲ။
ဘယျဟာဝယျသငျ့လဲ? ZenFone Max Pro M1
Xiaomi ရဲ့ စီးပှားရေးမျောဒယျလျတဈခုလုံးက ဘတျဂကျြစမတျဖုနျးတှအေပျေါအခွခေံထားတာပါ။ ZenFone Max Pro M1 ရောကျလာတော့ Xiaomi အတှကျ စိုးရိမျစရာပါပဲ။
ASUS မှာ အလုံးရေ လောကျလောကျငှငှရှိရဲ့လားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ထောကျပံ့မှုကိစ်စတှကေ အလုံးရမေလောကျမငှမှုကို ဖွဈစပွေီးတော့ အောငျမွငျမှုက အဲဒီအရေးအပျေါ မူတညျနပေါတယျ။ ZenFone Max Pro M1 ကို မသေုံးရကျနမှေ့ာ Flipkart ကတဈဆငျ့ ရောငျးခသြှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleiPhone X ရောင်းအားကို အခြားသူတွေလို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ Apple
Next articleကိုယ့်ရဲ့လက်ကို touchscreen အဖြစ်အသုံးပြရမယ့် LumiWatch concept